Tombontsoa azo avy amin'ny voa sesame - Hoditra
Ao Amin'ny The News Marika Momba Ny Herinaratra Vehivavy Vaovao Momba Ny Lamaody Mpinamana Sy Fianakaviana Pets Diy Ny Adin-Tsaina Ao An-Tokantrano Beauty Bridal Lakozia Maharitra
#ExpertGuide: Tombontsoa amin'ny hatsaran-tarehy amin'ny voa sesame
Ny voa sesame angamba no iray amin'ireo mpamatsy fahita indrindra ampiasaina amin'ny sakafo sy amin'ny fanaovana zava-mamy. Raha ny marina, ny zava-mamy vita amin'ny masomboly sesame miaraka amin'ny jaggery sy voaniho dia malaza indrindra, indrindra amin'ny ririnina. Ny menaka azo avy amin'ny masomboly koa dia malaza be. Raha ny tena izy, any Ayurveda, ny menaka voa sesame dia voalaza fa ‘dosha voalanjalanja’ ary mifanaraka amin'ny ‘doshas’ rehetra. Ny famandrihana Ayurveda dia mampiasa voa sesame sy menaka tokoa. Nampiasaina nandritra ny taonjato maro izy io ary fantatra amin'ny fananana mahavelona, ​​fisorohana ary fanasitranana. Ny voa sesame no voalaza fa manana menaka avo indrindra. Izy ireo koa dia voalaza fa manana fiarovana amin'ny masoandro amin'ny SPF 6. Noho izany dia nanoro hevitra azy i Ayurveda mba hanorana amin'ny vatana. Raha ny lanjan'ny sakafo mahavelona azy dia misy asidra misy omega-6, antioxidant, vitamina, mineraly ary flavonoids. Manankarena vitamina B sy E izy ary misy mineraly toy ny calcium, manezioma, zinc, vy ary phosforus.
Noho ny singa mahavelona azy sy ny fananana miaro ny masoandro dia voalaza fa mety tsara amin'ny fikolokoloana ivelany ny hoditra sy ny volo koa. Fantatra amin'ny fananana manohitra ny mamaivay, manohitra ny bakteria ary manohitra ny holatra izy io ary mitazona ny hoditra ho salama amin'ny aretina vokatry ny bakteria sy ny holatra. Voalaza mihitsy aza fa manasitrana aretin-holatra toy ny tongotr'ireo atleta. Izy io koa dia mamelona ny hoditra ary manatsara ny fivezivezen'ny rà mankany amin'ny tampon'ny hoditra, ka mitondra otrikaina amin'ny hoditra sy folikelin'ny volo. Malemy fanahy tokoa ny vokatry ny menaka voa sésame ka voalaza fa mety indrindra amin'ny fanorana ny hoditry ny zazakely.
Hialana amin'ny fahasimban'ny masoandro
Noho ny fananany miaro ny masoandro dia manampy amin'ny fampitoniana ny hoditra simba amin'ny masoandro izy ary miaro ny hoditra amin'ny fahasimbana ateraky ny taratra ultraviolet. Manampy amin'ny fiarovana ny hoditra amin'ny tasy mainty izy io ary koa miaro ireo fananan'ny tanora amin'ny hoditra. Voalaza fa ny menaka voa sesame ampiasaina matetika amin'ny fanorana dia mety hisoroka ny olan'ny hoditra, anisan'izany ny homamiadan'ny hoditra. Ny fampiharana ny menaka alohan'ny fandroana dia voalaza ihany koa fa miaro ny hoditra amin'ny vokatry ny rano klôro.
Amin'ny maha-fikosehana tarehy sy vatana
Ny masira sesame dia azo ampiasaina mora foana amin'ny fikosehana ny tarehy sy ny vatana. Raha ny marina dia hanampy amin'ny fanesorana tan izany. Raiso ny sesame, ravina mint, maina iray sotro isaky ny ranom-boasarimakirana sy tantely. Kobohy ny masomboly sesame ary apetaho ny ravina mint maina. Afangaroy amin'ny ranom-boasarimakirana sy tantely kely izy ireo ary apetaho amin'ny tarehy sy ny sandry. Ny masomboly sesame dia manampy amin'ny fanesorana ny tan ary mamorona loko miloko mitovy. Ny Mint dia misy vokany mampientanentana ary manampy mamirapiratra amin'ny hoditra, fa ny tantely kosa mamontsina sy manalefaka ny hoditra. Ahosotra moramora amin'ny hoditra. Avelao mandritra ny minitra vitsy ary avy eo sasao amin'ny rano.
Koa satria manan-karena mahavelona ny masomboly sesame, dia azo ampiasaina amin'ny menaka koa ny menaka. Raha ny marina dia manampy amin'ny fitazonana ny volo sy ny loha tsy ho voan'ny olana toy ny dandruff sy ny fungal aretina. Raha ny marina dia voalaza fa hampiroborobo ny fitomboan'ny volo ary hijery ny fihenan'ny volo. Ny fampiharana menaka sesame manafana ny volo dia manampy ny volo iharan'ny lotion, loko ary loko. Mamelona ny volo ary mampalefaka azy. Raha ny marina, ny fitsaboana menaka sesame dia voalaza fa misoroka ny vaky volo ary manampy hamirapiratra amin'ny volo.
Vakio ihany koa: Skinimalism: fironana momba ny fikarakarana hoditra izay antenaina haharitra 2021
Sokajy Beauty Bridal Manjamaso Fironana
tia sarimihetsika amin'ny Hollywood
Hairstyles ela Boribory somary lavalava volo manify face
miverina any am-pianarana ho an'ny mpianatra nalaina
mpisolo toerana ny fantsika remover poloney
teny nalaina malaza momba ny sekoly
sary mofomamy gilasy